Lizovela enkantolo iphoyisa ngecala lokubamba inkunzi | News24
Lizovela enkantolo iphoyisa ngecala lokubamba inkunzi
Polokwane – Iphoyisa lomgwaqo lizovela enkantolo ngoLwesihlanu ngesinzolo zokuphanga ibhizinisi, kusho amaphoyisa ngoLwesine.
Iphoyisa elineminyaka engu-26 ubudala elisebenzela amaphoyisa omgwaqo aseHazyview, eMpumalanga, liboshwe ngoLwesithathu ngemuva kokuba abesilisa abane bebambe inkunzi isitolo sowokufika behlome ngezibhamu eLulekani, kusho uLieutenant Colonel Robert Netshiunda.
"Abesilisa abahlanu bebehamba ngemoto ebomvu ngesikhathi abathathu kubona bephuma behlasela isitolo sowokufika, bathatha imali engu-R2 000 kanye ne-airtime ka-R1 500," esho.
Kubikelwe amaphoyisa ngalolu daba, aphuthuma ngokushesha.
OLUNYE UDABA: Kuduke umfana ophazamisikeli emqondweni, othanda izitimela
"Bajahiwe abasolwa baze bashiya imoto yabo kuMica Road, babaleka ngonyawo bangena ehlathini. Umshayeli wemoto, okutholakale ukuthi uyiphoyisa, uboshiwe ngesikhathi ezama ukubaleka,” kusho uNetshiunda.
Amaphoyisa asathungatha abanye abasolwa, esho.
"Umsolwa uzovela eNkantolo kaMantshi eLulekani ngoLwesihlanu ngecala lokuphanga ibhizinisi,” esho.